Samsung ndabere PIN: Ihe na-eme mgbe Samsung Ngwaọrụ Kpọchiri Akpọchi
1. ndabere Samsung Ndi ana-akpo
2. ndabere Samsung Photos
3. ndabere Samsung SMS
4. Samsung ndabere PIN
5. Samsung Kies ndabere
6. ndabere Samsung ka Ígwé ojii
7. Samsung ndabere Software
Part 1. Gịnị Bụ Samsung ndabere PIN? Part 2. Gịnị mere i kwesịrị Mee Up a ndabere PIN? Part 3. Olee otú iji melite a ndabere PIN na Samsung Ngwaọrụ? Part 4. Olee Gbanwee PIN na Samsung Ngwaọrụ? Part 5. Gịnị na-eme mgbe gị na Samsung Android Ngwaọrụ na-ekpochi Up enweghị ndabere PIN?
Part 1. Gịnị Bụ Samsung ndabere PIN?
E nwere ọtụtụ ihuenyo mkpọchi nhọrọ dị na gị Samsung mobile ngwaọrụ. Ha na-depụtara ala dị ka nche larịị ha na-enye na swipe ịbụ nke kasị ala ala na paswọọdụ ịbụ ndị kasị elu.
Ihu na Voice
Mgbe ọ bụla ị melite nche mkpọchi iji ihu Kpọghe, ihu na olu, ma ọ bụ ụkpụrụ nhọrọ, ị ga-kpaliri melite a ndabere PIN dị ka mma. Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị ada ada na-aghọta ihu gị na / ma ọ olu ma ọ bụ ị na-echefu gị ụkpụrụ, nkwado ndabere na mpaghara PIN ga-eji na-gara aga gị na ihuenyo mkpọchi. Ya mere, a ndabere Kpọghe PIN ma ọ bụ ụkpụrụ, dị ka aha-atụ aro, bụ a PIN na nke ị nwere ike ịda azụ mgbe ị na-echefu gị na ihuenyo mkpọchi ma ọ bụ ngwaọrụ gị na-adịghị aghọta gị.
Part 2. Gịnị mere i kwesịrị Mee Up a ndabere PIN maka Samsung Ngwaọrụ?
Tupu ghọtara mkpa nke a ndabere PIN, i kwesịrị ịghọta ihe ihu Ị kpọghee ekwt, ihu na olu, na ụkpụrụ nhọrọ ..
Face Kpọghe ghotara ihu gị na unlocks ihuenyo. Mgbe mwube ihu Kpọghe, ọ na-ewe foto nke ihu gị. Na ọ bụ obere ala karịa a paswọọdụ ma ọ bụ a ụkpụrụ n'ihi ngwaọrụ nwere ike-unlocked site ọ bụla onye yiri gị. Ọzọkwa, ngwaọrụ nwere ike ghara ịdị na-aghọta na ị na niile ruru ka ọ bụla unspecific ihe kpatara ya. Ya mere, na ngwaọrụ kpaliri gị melite a ndabere PIN ma ọ bụrụ na ihu gị na-adịghị ghọtara.
Ihu na Voice:
Supplementing ihu Kpọghe atụmatụ, a nhọrọ na-ewe gị olu echiche. Ị nwere ike Ị kpọghee ekwt ihuenyo site n'igosi ihu gị nakwa dị ka na-enye iwu olu ị melite mbụ. Kwesịrị ngwaọrụ gị amaghị na ihu gị ma ọ bụ olu gị ma ọ bụ abụọ, ị ga-mkpa iji nkwado ndabere na mpaghara PIN Ị kpọghee ekwt ihuenyo.
Ọ na-melite site na ijikọ ntụpọ na ihuenyo ọ bụla executable n'ụzọ. Ọ dịkarịa ala, anọ ntụpọ ga-esonyere ike a ụkpụrụ, nke a ga-eji na-Ị kpọghee ekwt ihuenyo. Ọ bụ nnọọ ekwe omume na ị na-echefu gị ụkpụrụ ma ọ bụ a na-eme ka nwa ewu multiple mgbalị Ị kpọghee ekwt gị na ihuenyo gị anọghị, otú ị ga-eme ka n'aka na ị nwere ndabere pụtara Ị kpọghee ekwt gị na ihuenyo.
Gịnị Na-eme bụrụ na unu enweghị Ị kpọghee ekwt na ị na-adịghị a ndabere PIN?
Ọ bụrụ na i chefuola gị na ihuenyo mkpọchi ma ọ bụ ngwaọrụ gị ada ada na-aghọta na ị na unu adịghị nwere ndabere PIN, nanị nhọrọ ị na-ekpe na, mgbe Google nzere bụ ike resetting ngwaọrụ gị. Ị na-ize ndụ nke ịdapụ mkpa data na ekwentị gị si esịtidem ebe nchekwa ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ike a ndabere maka ya na gị PC. Ọbụna mgbe ahụ, niile ọdịnaya ghara kwadoo. Ya mere, na-enwe ndabere PIN aghọwo a mkpa.
Part 3. Olee otú iji melite a ndabere PIN na Samsung Ngwaọrụ?
Ị ga-kpaliri melite a ndabere PIN mgbe mwube a ihuenyo mkpọchi. Ka a na ihuenyo mkpọchi:
Nzọụkwụ 1. Gaa menu.
Nzọụkwụ 2. Open Ntọala.
Nzọụkwụ 3. Click mkpọchi ihuenyo na mgbe ahụ na ihuenyo mkpọchi. Ị ga-ahụ ndị na-esonụ na ihuenyo.
Nzọụkwụ 4. Ọ bụrụ na ị họrọ Face Kpọghe, ihu na Voice, ma ọ bụ ụkpụrụ si n'elu nhọrọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ẹka a ihuenyo melite a ndabere PIN.
Nzọụkwụ 5. Pịa na Jizọs ma ọ bụ PIN, nke ọ bụla ị chọrọ setịpụrụ dị ka a ndabere PIN. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ PIN, ọ ga-ewe gị na ihuenyo ebe i nwere ike pịnye nkwado ndabere na mpaghara PIN, nke nwere ike ịbụ 4 ka 16 digits. Pịa na Gaa n'ihu.
Nzọụkwụ 6. Re-abanye PIN iji gosi na pịa OK rụchaa usoro.
Part 4. Olee Gbanwee ndabere PIN na Samsung Ngwaọrụ?
Ị nwere ike ịgbanwe ndabere PIN na gị Samsung ngwaọrụ site na eso otu nzọụkwụ nke mwube nke PIN maka oge mbụ. Iji mee otú ahụ:
Nzọụkwụ 1. Gaa menu> Ntọala> mkpọchi ihuenyo> ihuenyo mkpọchi.
Nzọụkwụ 2. Ị ga-kpaliri ịbanye nche Kpọghe ozi ị na ugbua guzobere. Pịa Next.
Nzọụkwụ 3. Họrọ nche mkpọchi mwube na ị chọrọ nwere ma na-agbaso onscreen iwu rụchaa usoro.
Nzọụkwụ 4. Họrọ bụla kpọmkwem ndabere faịlụ site na dobe ala menu iweghachi gị data. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike ịhụ faịlụ, pịa na Find faịlụ bọtịnụ. Họrọ faịlụ ka n'ihu n'ihu.
Part 5. Gịnị na-eme mgbe gị na Samsung Android Ngwaọrụ na-ekpochi Up enweghị ndabere PIN?
Ọ bụrụ na i chefuola nche Kpọghe nakwa dị ka ndabere PIN, ị ga-ike tọgharịa ngwaọrụ. Ọ ga-akwụsị niile data na ngwaọrụ esịtidem ebe nchekwa ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ndabere niile faịlụ ma ọ bụ foto. I nwere ike ida unbacked ọdịnaya.
Cheta na: E nwere ike ịbụ nta iche dị na ike nrụpụta usoro dabere na anam na nlereanya nke ị Samsung ngwaọrụ ahụ; Otú ọ dị, n'ozuzu usoro bụ otu ihe ahụ.
Nzọụkwụ 1. Gbanyụọ ngwaọrụ gị site na ịpị ike bọtịnụ ma ọ bụ wepụ batrị site na ekwentị.
Nzọụkwụ 2. Gbalịa ọ bụla nke na-esonụ n'ịgwa.
Olu elu + olu ala + Ike isi
Olu ala + Ike isi
Home isi + Ike isi
Olu elu + Home + Ike isi
Press ma hapụ ma otu ma ọ bụ niile nke igodo gwụla ma ị na-eche na ekwentị vibration ma ọ bụ na-ahụ "Android usoro mgbake" ihuenyo.
Nzọụkwụ 3. Jiri Mpịakọta Down bọtịnụ ịnyagharịa site na menu. Ịchọta "Hichapụ data / factory nrụpụta." Pịa Ike isi họrọ ya.
Nzọụkwụ 4. Ọzọ ịnyagharịa site na nhọrọ iji Mpịakọta Down bọtịnụ. Chọta na họrọ "Hichapụ niile ọrụ data". A nrụpụta usoro ga-rụrụ.
Nzọụkwụ 5. Họrọ "Reboot usoro ugbu a" mgbe usoro zuru ezu.
Top 5 Alternatives ka Samsung Kies
Wụnye / Uninstall / Update Samsung Kies on Mac
Wụnye / Uninstall / Update Samsung Kies on PC
Olee otú Jiri Samsung Kies jikwaa Files
Nyefee faịlụ site Samsung ka iPhone
iPhone VS Samsung ekwentị mkpanaaka na
Bugharịa faịlụ site Nokia ka Samsung
Bugharịa Ndi ana-akpo si HTC ka Samsung
Copy Data si iPad ka Samsung
Wepụ Blackberry Ndabere maka Samsung ekwentị
Nyefee na Ndi ana-akpo si gam akporo ka Samsung
3 Ụzọ mbubata Ndi ana-akpo ka Samsung Galaxy
Samsung SMS Iweghachite: Naghachi ehichapụ SMS si Samsung
Samsung Kies Download: Ọ bụla Version Ị Mkpa!
> Resource> Samsung> Samsung ndabere PIN: Ihe na-eme mgbe Samsung Ngwaọrụ Kpọchiri Akpọchi